အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနိဒါန်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
အပြုအမူစွဲ (2010) မှနိဒါန်း
မှတ်ချက်များ - အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်တူညီသောနောက်ခံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများ၊ ယန္တရားများနှင့်အပြုအမူများကိုအတူတူမျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ၊ 36(5): 233-241 ။
Doi: 10.3109 / 00952990.2010.491884
1 ။ Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006;101 (ပျော့ပျောင်း 1): 142-151 ။ [PubMed]
အဆိုပြုထားသော DSM-V တွင် ၆။ Holden C. အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု သိပ္ပံ။ 2010;327: 935 ။ [PubMed]
4 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc; 2000 စာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR)
5. Chambers RA, Potenza MN ။ Neurodevelopment, Impulse နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစားခြင်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19(1): 53-84 ။ [PubMed]
6. Slutske WS ။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်သဘာဝပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းရှာဖွေခြင်း - အမေရိကန်အမျိုးသားစစ်တမ်းနှစ်ခု၏ရလဒ်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 297-302 ။ [PubMed]
7 ။ ဘရူဂျာ Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008;75(1): 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၉။ Blanco C၊ Moreyra P၊ Nunes EV၊ Sáiz-Ruiz J၊ Ibáñezအေ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား - စွဲခြင်းလော။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6(3): 167-176 ။ [PubMed]
၁၀။ Grant JE, Brewer JA, Potenza MN ။ ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ neurobiology ။ CNS Spectr ။ 2006;11(12): 924-930 ။ [PubMed]
၁၁။ Grant JE, Potenza MN ။ kleptomania အတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျား -related ကွဲပြားခြားနားမှု။ CNS Spectr ။ 2008;13(3): 235-245 ။ [PubMed]
12. Grant JE ကင်မ် SW ။ လူကြီး 131 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;62(12): 957-962 ။ [PubMed]
13. Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, O'Malley SS ။ လောင်းကစားဟယ်လင်းကို အသုံးပြု၍ ပြaနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတွင်ကျား - မကွဲပြားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158(9): 1500-1505 ။ [PubMed]
14. Brady KT, Randall CL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1999;22(2): 241-252 ။ [PubMed]
15. Ledgerwood DM, Weinstock J, Morasco BJ, Petry NM ။ လက်တွေ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်လတ်တလောလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတရားမဝင်အပြုအမူများနှင့်မပါဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏ကုသမှုဆိုင်ရာဟောကိန်းများ။ J ကို Am Acad စိတ်ရောဂါကုသမှုဥပဒေ။ 2007;35(3): 294-301 ။ [PubMed]
16. Lejoyeux M, Tassain V, Solomon J, စိတ်ကျရောဂါလူနာများအားအတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှု၏ Ades J. လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;58(4): 169-173 ။ [PubMed]
17. ကင်မ် SW, Grant က je ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားရောဂါနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2001;104(3): 205-212 ။ [PubMed]
18. Grant JE ကင်မ် SW ။ kleptomania အတွက် temperament နှင့်အစောပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;43(3): 223-228 ။ [PubMed]
20. Kelly TH, Robbins G, Martin CA, Fillmore MT, Lane SD, Harrington NG, Rush CR ။ တစ် ဦး ချင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းချက်များ - d-amphetamine နှင့် sensation-seek status ။ Psychopharmacology (Berl) 2006;189(1): 17-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21. Tavares H ကို, Gentil V. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါ: ဆန္ဒအလျောက်၏ရောဂါများတစ်ရောင်စဉ်ဆီသို့ ဦး တည်။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2007;29(2): 107-117 ။ [PubMed]
22. Blanco C, Potenza MN, Kim SW, Ibáñez A, Zaninelli R, Saiz-Ruiz J, Grant JE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;167(1-2): 161-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23. Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell အေဒီ, Robbins TW, Sahakian BJ ။ မော်တာတားစီးနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(7): 1282-1284 ။ [PubMed]
24. Odlaug BL, Grant JE, Chamberlain SR ။ မော်တာတားစီးနှင့်ရောဂါဗေဒအသားအရေကောက်ယူအတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ Prog Neuropharm Biol စိတ်။ 2009 နိုဝင်ဘာ 13; [ပုံနှိပ်ခြင်းမတိုင်မီ Epub]
25. Cunningham-Williams က RM, Cottler LB, Compton WM, 3rd, Spitznagel EL ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီး: ပြproblemနာလောင်းကစားသမားများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးမမှန် - စိန့်လူးဝစ်ကူးစက်ရောဂါဖမ်းမိStudyရိယာလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 1998;88(7): 1093-1096 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၆။ Petry NM, Stinson FS, Grant BF ။ DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများကိုတိုက်ကျွေးခြင်း - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;66(5): 564-574 ။ [PubMed]
27. Bland RC, Newman SC, Orn H, Edmonton ရှိရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစား၏ Stebelsky G. Epidemiology ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုနိုင်သလား။ 1993;38(2): 108-112 ။ [PubMed]
28. el-Guebaly N, Patten SB, Currie S, Williams JV, Beck CA, Maxwell CJ, Wang JL ။ လောင်းကစားအပြုအမူ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါများအကြားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ J ကို Gamble လုံး။ 2006;22(3): 275-287 ။ [PubMed]
29. Welte JW, Barnes GM၊ Tidwell MC, Hoffman JH ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအကြားလောင်းကစားခြင်းပြproblemနာသည်အမျိုးသားစစ်တမ်းမှရလဒ်ဖြစ်သည်။ J ကို Gamble လုံး။ 2008;24(2): 119-133 ။ [PubMed]
30. Yen JY၊ ကို CH၊ ယန်း CF၊ Chen CS၊ Chen CC ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားအန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်းတို့အကြားဆက်စပ်မှု - ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience ။ 2009;63(2): 218-24 ။ [PubMed]
31. Stinchfield R, Kushner MG, Winters KC ။ လောင်းကစားပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လောင်းကစားကုသမှုရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2005;21(3): 273-297 ။ [PubMed]
32. Duhig AM, Maciejewski PK, Desai RA, Krishnan-Sarin S, Potenza MN အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတိတ်ကာလလောင်းကစားသမားများနှင့်မဟုတ်သောလောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2007;32(1): 80-89 ။ [PubMed]
33. Grant JE, Potenza MN ။ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;17(4): 237-241 ။ [PubMed]
34. Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, Krishnan-Sarin S, George TP, O'Malley SS ။ လောင်းကစားလိပ်စာဟုခေါ်သည့်လောင်းကစားသမားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြproblemနာပြနာများ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2004;13(5): 471-493 ။ [PubMed]
35. Presta S, Marazziti D, Dell'Osso L, Pfanner C, Pallanti S, Cassano GB ။ Kleptomania: အီတလီနမူနာတစ်ခုတွင်လက်တွေ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;43(1): 7-12 ။ [PubMed]
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါလူနာများတွင် Di Nicola M၊ Tedeschi D, Mazza M, Martinotti G, Harnic: D, Catalano V, Bruschi A, Pozzi, G, Bria P, Janiri L. J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2010 ဇန်နဝါရီ 16;
လောင်းကစားပြproblemsနာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက်နှောင့်နှေးနေသောဆုလာဘ်များကို Petry NM၊ Casarella T. မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 56(1): 25-32 ။ [PubMed]
Bechara A. အန္တရာယ်ရှိသောစီးပွားရေး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှု။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19(1): 23-51 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားလူနာအတွက် 39. Cavedini P ကို, Riboldi, G, Keller R ကို, D'Annucci တစ် ဦး က, Bellodi အယ်လ် Frontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;51(4): 334-341 ။ [PubMed]
Ko CH၊ Hsiao S, Liu GC, Yen JU, Yang MJ, Yen CF. ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အလားအလာနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနေသောကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏စရိုက်လက္ခဏာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2010;175: 121-125 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းတွင် 41 Goudriaan AE, Oosterlaan J, de Beurs E, van den Brink ဒဗလျူ Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များ - အရက်မှီခိုမှု၊ Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စွဲလမ်း။ 2006;101(4): 534-547 ။ [PubMed]
42. Potenza MN ။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363(1507): 3181-3189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ endophenotypes အထိတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ endophenotypes အထိ compulsive နှင့် impulsive အပြုအမူများ၊ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ endophenotypes၊ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35(3): 591-604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44. Blanco ကို C, Orensanz-Muñoz L, Blanco-Jerez ကို C, Saiz-Ruiz ဂျေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် MAO လှုပ်ရှားမှု: တစ် ဦး psychobiological လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;153(1): 119-121 ။ [PubMed]
လူမှုရေး phobia အတွက် 45. Hollander အီး, Kwon J ကို, Weiller က F, Cohen ကို L ကို, Stein DJ သမား, DeCaria ကို C, Liebowitz M က, Simeon Ser Serotonergic function ကို: ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါဘာသာရပ်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1998;79(3): 213-217 ။ [PubMed]
46. ​​Dagher A၊ Robbins TW ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စွဲ, dopamine: ပါကင်ဆန်ရောဂါမှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009;61(4): 502-510 ။ [PubMed]
47. O'Sullivan SS, Evans AH, Lees AJ Dopamine dysregulation syndrome ရောဂါ - ၎င်း၏ရောဂါဗေဒ, ယန္တရားများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2009;23(2): 157-170 ။ [PubMed]
48 Zack M က, Poulos CX ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် psychostimulant စွဲအတွက် dopamine များအတွက်စင်ပြိုင်အခန်းကဏ္။ ။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2009;2(1): 11-25 ။ [PubMed]
49. Potenza MN, Leung HC၊ Blumberg HP၊ Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, Skudlarski P, Gore JC ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(11): 1990-1994 ။ [PubMed]
50. လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S ကို, Bonson K ကို, Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000;10(3): 334-342 ။ [PubMed]
51. ကို CH, Liu GC, Hsiao S, ယန်း JY, ယန် MJ, လင်း WC, ယန်း CF, Chen က CS ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2009;43(7): 739-747 ။ [PubMed]
52. Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Gläscher J, Büchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(2): 147-148 ။ [PubMed]
53. Wrase J, Schlagenhauf F, Kienast T, Wüstenberg T, Bermpohl F, Kahnt T, Beck A, Ströhle A, Juckel G, Knutson B, Heinz အေ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အလုပ်မဖြစ်မှု detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Neuroimage ။ 2007;35(2): 787-794 ။ [PubMed]
54 Steeves TD, Miyasaki J, Zurowski M, Lang AE, Pellecchia, G, Van Eimeren T, Rusjan P, Houle S, Strafella AP ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူပါကင်ဆန်လူနာများတွင် striatal dopamine လွှတ်ပေးမှုတိုးမြှင့်: တစ် [11C] raclopride PET လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 2009;132(Pt 5): 1376-1385 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 Bradberry CW ။ ကြွက်များ၊ မျောက်များနှင့်လူသားများတွင် cue ဆိုးကျိုးများကိုကိုကင်း sensitip နှင့် dopamine စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း။ သဘောတူညီချက်၊ သဘောမတူညီမှုများနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191(3): 705-717 ။ [PubMed]
56. Weintraub: D, Potenza MN ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders ။ Curr Neurol Neurosci ကိုယ်စားလှယ်။ 2006;6(4): 302-306 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်နာတာရှည် dopaminergic စိတ်ကြွဆေး၊ ဒစ်စနီနိစ်မှသည်ထိန်းချုပ်မှုပြtoနာများအထိ ၅၇။ Voon V၊ Fernagut PO၊ Wickens J၊ Baunez C၊ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol ။ 2009;8: 1140-1149 ။ [PubMed]
Parkinson ရောဂါတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များရှာဖွေသည့်အပြုအမူများ၏ 58. Voon V, Hassan K, Zurowski M, de Souza M, Thomsen T, Fox S, Lang AE, Miyasaki J. အာရုံကြော။ 2006;67(7): 1254-1257 ။ [PubMed]
59. Weintraub: D, Siderowf အေဒီ၊ Potenza MN၊ Goveas J, Morales KH, Duda JE, Moberg PJ, Stern MB ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine agonist ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ Arch Neurol ။ 2006;63(7): 969-973 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 Zack M က, Poulos CX ။ D2 ၏ရန်သူသည်လောင်းကစားဝိုင်းတွင်လောင်းကစားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(8): 1678-1686 ။ [PubMed]
၆၁ Fong T၊ Kalechstein A၊ Bernhard B, Rosenthal R, Rugle L. Olanzapine ၏မျက်မမြင်နှစ် ဦး၊ ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီဖဲချပ်ဝေကစားသူများအားကုသမှုအတွက်စမ်းသပ်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89(3): 298-303 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကုသမှုတွင် 62. McElroy SL၊ နယ်လ်ဆင် EB၊ Welge JA၊ Kaehler L၊ Keck PE၊ Jr Olanzapine ။ ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;69(3): 433-440 ။ [PubMed]
63 ။ Black က DW, Monahan စာတိုက်, Temkit M က, Shaw ကအမ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်မိသားစုလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2006;141(3): 295-303 ။ [PubMed]
64. Grant JE ။ kleptomania နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မိသားစုသမိုင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;44(6): 437-441 ။ [PubMed]
65 ။ Black က DW, Repertinger S က, Gaffney ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, compulsive ဝယ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Gabel ဂျေမိသားစုသမိုင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidity: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;155(7): 960-963 ။ [PubMed]
66. Slutske WS, Eisen S, True WR, Lyons MJ, Goldberg J, Tsuang M. ယောက်ျားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှုတို့အတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;57(7): 666-673 ။ [PubMed]
67. Tsuang MT, Lyons MJ, Meyer JM, Doyle T, Eisen SA, Goldberg J, True W, Lin N, Toomey R, Eaves L. အမျိုးသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးအလွဲသုံးစားမှု - မူးယစ်ဆေးဝါး၏အဓိကအခန်းကဏ္ and နှင့် shared အားနည်းချက်များကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;55(11): 967-972 ။ [PubMed]
68. DE လာ၏။ အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလိုအပ်ဘာကြောင့် polygenic အမွေအဘို့: DRD2 ဗီဇလေ့လာမှုများမှသင်ခန်းစာများ။ အရက်။ 1998;16(1): 61-70 ။ [PubMed]
အပြုအမူတားစီးခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် / ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ dopamine receptor D69 ရှိမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်မှု၏ 2. Hamidovic A, Dlugos A, Skol A, Palmer AA, de Wit H. အကဲဖြတ်ခြင်း။ ကျန်းမာသောသင်တန်းသားများတွင် d-amphetamine နှင့်အတူလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2009;17(6): 374-383 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70. Lee Y, Han D, Yang K, Daniels M, Na C, Kee B, Renshaw P. စိတ်ကျရောဂါနှင့်တူသော 5HTTLPR ၏ပိုလီမာရေးဝါဒနှင့်စိတ်ထားသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများတွင်အလွန်အမင်းအင်တာနက်။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2009;109 (1): 165-169 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒကစားသမားများအတွက် 71 Petry မိုင်, Ammerman Y ကို, Bohl J ကို, Doersch တစ် ဦး, Gay H ကို, Kadden R ကို, Molina ကို C, Steinberg K. သိမှု - အပြုအမူကုထုံး။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 2006;74(3): 555-567 ။ [PubMed]
72. Teng EJ, Woods DW, Twohig အမတ်များ။ နာတာရှည်အရေပြားကောက်ခြင်းအတွက်အလေ့အကျင့်ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်း - ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ Behav Modif ။ 2006;30(4): 411-422 ။ [PubMed]
73. Mitchell JE, Burgard M, Faber R, Crosby RD, de Zwaan M. သိမှုဆိုင်ရာအပြုအမူကုထုံးသည်မဝယ်မဝယ်ဝယ်ဝယ်ရောဂါအတွက်ကုထုံး။ Res Ther ပြုမူနေ။ 2006;44(12): 1859-1865 ။ [PubMed]
74. Toneatto T, Dragonetti R. ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်းအတွက်လူထုအခြေပြုကုသမှု၏ထိရောက်မှု: သိမှု - အပြုအမူနှင့်ဆယ့်တစ်ဆယ့်နှစ်ဆင့်ကုထုံး၏အမည်ခံစမ်းသပ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2008;17(4): 298-303 ။ [PubMed]
၇.၅ Dannon PN၊ Lowengrub K၊ Musin E၊ Gonopolsky Y၊ Kotler M. ၁၂ လကြာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုလေ့လာခြင်း - အဓိကရလဒ်လေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2007;27(6): 620-624 ။ [PubMed]
77. Grant JE, Potenza MN, Hollander E, Cunningham-Williams R, Nurminen T, Smits, G, Kallio A. Multicenter သည်လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်ကုသပေးသော nalmefene ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 303-312 ။ [PubMed]
78. Grant JE၊ Kim SW, Hartman BK ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတိုက်တွန်းမှုများကုသမှုအတွက် opiate ရန်တွေ့ naltrexone ၏ double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;69(5): 783-9 ။ [PubMed]
79. Grant JE, Desai RA, Potenza MN ။ နီကိုတင်းမှီခိုမှု၊ subsyndromal နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;70(3): 334-343 ။ [PubMed]
80 ။ je ပေးသနား။ naltrexone နဲ့ကုသ compulsive ဝယ်သုံးအမှုပေါင်း။ Int J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုအလေ့အကျင့်။ 2003;7: 223-5 ။
ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုနှစ်ခုမှ Raymond NC၊ Grant JE၊ Kim SW၊ Colalt E. naltrexone နှင့် serotonin တို့မှလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကုသမှု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2002;17(4): 201-205 ။ [PubMed]
82 Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ အင်တာနက်လိင်စွဲမှုကို naltrexone ဖြင့်ကုသသည်။ Mayo Clin proc ။ 2008;83(2): 226-230 ။ [PubMed]
83. အာနိုး LM, Auchenbach MB, McElroy SL ။ Psychogenic excoriation ။ လက်တွေ့လက္ခဏာများ, အဆိုပြုထားရောဂါရှာဖွေစံ, ရောဂါနှင့်ကုသမှုမှချဉ်းကပ်မှု။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2001;15(5): 351-359 ။ [PubMed]
84. Insel TR, Pickar D. Naloxone အုပ်ချုပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှု - မငြိမ်မသက်ဖြစ်သည့်ရောဂါ - အမှုပေါင်း (၂) ခု၏အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983;140(9): 1219-1220 ။ [PubMed]
85. Roncero C, Rodriguez-Urrutia A, Grau-Lopez L, Casas အမ် Antiepilectic မူးယစ်ဆေးဝါးများစိတ်ကြွဆေးမမှန်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်။ Actas Esp Psiquiatr ။ 2009;37(4): 205-212 ။ [PubMed]
et al 86. ဂျွန်ဆင် BA, Rosenthal N ကို, Capece ဂျေအေ, Wiegand က F, Mao L ကို, Beyers K သည်။ အရက်သေစာမှီခိုမှုကိုကုသရန် Topiramate - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2007;298(14): 1641-151 ။ [PubMed]
87. Johnson BA, Swift RM, Addolorato G, Ciraulo DA, Myrick H. GABAergic ဆေးဝါးများ၏အရက်သောက်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်စိတ်ချရမှုနှင့်ထိရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29(2): 248-254 ။ [PubMed]
et al 88 Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG, Dackis C, Sparkman T, Weigley C ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် topiramate ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2004;75(3): 233-240 ။ [PubMed]
89 ။ je ကင်မ် SW, Odlaug BL ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု N-acetyl cysteine ​​တစ်ဦးအချိုမှု-ပြောင်းလဲပစ်အေးဂျင့်: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62(6): 652-657 ။ [PubMed]
et al 90. LaRowe SD က, Myrick H ကို, Hedden က S, Mardikian P ကို, Saladin M က, McRae တစ် ဦး ။ ကိုကင်းအလိုဆန္ဒကို N-acetylcysteine ​​မှလျှော့ချသလား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164(7): 1115-1117 ။ [PubMed]
91. Mardikian PN, LaRowe SD, Hedden S, Kalivas PW, Malcolm RJ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမ်းသပ်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;31(2): 389-394 ။ [PubMed]
92. Kalivas PW, Hu XT ။ psychostimulant စွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တားစီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29(11): 610-616 ။ [PubMed]
93. က Black DW ။ မသင်မနေရဝယ်: ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;57 (Suppl 8): ၅၀-၄၄ ။ [PubMed]
96. Goodman A. လိင်စွဲ: အမည်နှင့်ကုသမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1992;18(4): 303-314 ။ [PubMed]
97. Hollander အီး, Wong က CM ။ ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်လိင်မတော်မတရား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;56 (ပျော့ပျောင်း 4): 7-12 ။ [PubMed]
98. Lochner C, Stein DJ သမား။ obsessive- compulsive spectrum ကိုရောဂါအပေါ်အလုပ် obsessive-compulsive ရောဂါ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုပါသလား prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;30(3): 353-361 ။ [PubMed]
99. Grant JE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုချီးမြှင့်တားစီးဘို့အသစ်သောဆေးဝါးဗေဒပစ်မှတ်။ Neuropsychopharmacology ၏ 48th နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၏ဘာသာပြန်ခြင်းလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်တင်ပြသည်။ ဟောလိဝုဒ် FL ။ 2009 ။
100. Lochner C, Hemmings SM, Kinnear CJ, Niehaus DJ, Nel DG, Corfield VA ။ obsessive-compulsive disorder နှင့်အတူလူနာအတွက် obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;46(1): 14-19 ။ [PubMed]
101. Potenza MN ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အရေးကြီးပုံ - စွဲလမ်းမှုအတွက်ဘာသာပြန်ခြင်းသုတေသနအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34(13): 2623-2624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]